👟 Imisebenzi | Vakashela i-Hultsfred
Ufuna ukwenzani namuhla?
Ukuhamba izintaba, ukudoba, ukuhamba ngebhayisikili, ukubhukuda noma kungani ungahambi ngeHultsfred The Walk futhi ufunde kabanzi ngomkhosi odume kakhulu waseSweden? Kunemisebenzi eminingi lapha - futhi ngokuqinisekile kukhona okukufanele!
🥾 Bona futhi wenze
Igalofu yediski noma i-frisbee igalofu njengoba ibizwa nangokuthi wumdlalo odlalwa ngediski (frisbee). Isifundo singamamitha angama-780 ubude, sinezimbobo eziyi-9
Ichibi lehlathi elinokudoba okuhle ebusika. I-jrsjön iyichibi elincane elinamawa amancane eliqukethe izingxenye ezintathu ezincane. Indawo ezungezile iqukethe ihlathi le-coniferous futhi imiphetho ikhona
Ichibi eline-carp enkulu. I-Färgsjön iyisibonelo esihle sokuthi ichibi elincane lehlathi lingaba kanjani i-eldorado yokudoba kwezemidlalo. Ekwindla
Ichibi elinokudoba nge-pikeperch kwezinga. IHjortesjön itholakala ngasentshonalanga neVirserum, eduze neVirserumssjön nayo exhunywe nayo. Ichibi alinazo izakhamzimba
Jabulela imimoya ezolile kanye nesikhashana esithulile emanzini e-Hulingen enhle. Ukuze ushelele buthule phezu kwamanzi, yima ogwini ukuze uthole okukodwa
ILinden iyichibi elikhulu lehlathi elingenamsoco elinamanzi acwebile neziqhingi ezincane eziningana. Ihlathi likaphayini, i-porcupine, ama-blueberries ne-heather kugcwele echibini. Ichibi lijulile
IStora Åkebosjön itholakala ebangeni elingamakhilomitha ayisithupha entshonalanga neHultsfred futhi uzoyithola uma uhamba ngomgwaqo 6 unqamula eHammarsebo ubheke eStora Hammarsjön. Ichibi
Inkundla yokudlala yaseSilverdalen
Inkundla yokudlala yaseSilverdalen - indawo yokudlala nobubi! Amathuluzi nokuheha Swings Combi play Sandbox Barbecue area Picnic table (accessibility adapted)
Inkundla yokudlala kaMörlunda
Dlala uzungeze inkundla yokudlala kaMörlunda - kunezinto ezijabulisayo ongazithola lapha! Amathuluzi nezindawo ezikhangayo Uhlaka lokukhuphuka Umdlalo wokukhuphuka wezingane ezincane Ujika
Ukunyathela kophahla kuhamba emigwaqweni emincane. Uma ukhetha ukujikeleza lonke ibanga, ungabheka phambili ku-17 km ngokuhlukahluka
I-Cycle dressage kumzila omncane we-Flaten ukuya e-Gårdveda
Idressage yokuhamba ngebhayisikili eSmalspåret Flaten - Gårdveda Isipiliyoni esihle esivumelana nomndeni wonke. Esiteshini sikaFlaten uzothola ibhayisikili lethu lokugqoka. Kukhona ukupaka izimoto futhi
Izwa umuzwa wokugibela amabhasi esitimela aphuzi okuwolintshi aphefumula iminyaka engu-50s phakathi kwe-Virserum ne-Åseda. Jabulela izindawo ze-nostalgia futhi uphuze ikhofi elinezinhlobo eziyisikhombisa
Ithrekhi emfushane iHultsfred-Västervik
Igeji engu-7 km ubude namamilimitha angu-891 ububanzi ububanzi i-Hultsfred-Västervik isuka emahlathini aseSmåland entshonalanga, amachibi adlule, imiphakathi emincane kanye nezolimo
"Kunomculo emoyeni" (iculo likaHultsfred)
Sibona inkanyezi kuwo wonke umuntu. E-Stefan ebhasini, e-Hanna enkonzweni yokunakekelwa kwasekhaya futhi hhayi okungenani kuwe! Ukuhumusha komculo kweqembu lamahlaya i-Infallet kukhombisa ukuthi kuhle kangakanani
I-Dackestupet - ukuhamba ngebhayisikili entabeni nokuhamba ngebhayisikili entabeni